यौन जीवनमा कुन देशका नागरिक सबैभन्दा बढी सन्तुष्ट ? – Deshko News
Home » स्वास्थ्य » यौन जीवनमा कुन देशका नागरिक सबैभन्दा बढी सन्तुष्ट ?
जुन देशमा सेक्सलाई सहज रुपमा लिने गरिएका छन् त्यस्ता देशमा यौनसम्बन्धी रोग, कलिलो उमेरमा गर्भाधान र गर्भपतनसम्बन्धी समस्या कम देखिने गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, यस्ता देशका नागरिक आफ्नो यौन जीवनमा समेत बढी सन्तुष्ट रहने गरेका छन् । त्यस्ता देशको सूची यस्तो छ–
यौनकर्मीहरुलाई कानुनी मान्यता दिनु, पोर्नोग्राफीलाई लचिलो बनाउनु, किन्डरगार्टनमा यौन शिक्षाजस्ता विषयमा स्वीस समाज निकै अगाडि छ। आल्टरनेट वेभसाइटको टाडाअनुसार संसारमा स्वीट्जरल्याण्डबासी यौन सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी सन्तुष्ट छन् । स्वीट्जरल्याण्डमा नाबालिक आमाको अनुपातसमेत सबैभन्दा कम छ।
एक तिहाई स्पेनिश नागरिक पनि आफ्नो यौन जीवनबाट सन्तुष्ट छन् । स्पेनबासीका अनुसार एकै यौन साथीसँग समय बिताउँदा जीवनमा सन्तुष्टि प्राप्त हुने गर्दछ ।
मेन्स हेल्थ म्यागजिनका अनुसार इटलीमा खानेपिउने र सेक्सको बराबरी सम्बन्ध छ । सर्बेमा भाग लिएका ६४ प्रतिशत इटालियनले सेक्सका विषयमा कुनै गुनासो गरेनन् ।
ब्राजिलका पुरुषलाई स्पेनिश पुरुषपछि दोस्रो नम्बरको बेस्ट लभर भन्ने गरिएको छ। सर्वेमा भाग लिएका ८२ प्रतिशतले आफूले सातामा एकपटक सेक्स गर्ने गरेको बताएका छन् ।
ग्रीसमा सेक्सका विषयमा कुरा गर्न मानिसहरु अप्ठ्यारो मान्दैनन् । ड्युरेक्सको सर्वेमा भाग लिएकाहरुका अनुसार ५१ प्रतिशतले आफ्नो यौन जीवनमा खुसी रहेको बताए ।
६४ प्रतिशत डच नागरिक सेक्स जीवनको आधारभूत आवश्यकता ठान्दछन् । नेदरल्याण्डसमा कम उमेरमा गर्भवती हुने प्रतिशत ०.५३ प्रतिशत मात्र छ । एचआइभी संक्रमणसमेत निकै कम छ।
सन् २००८ मा सरकारले विद्यालयमा यौन शिक्षासम्बन्धी ७,००,००० प्रति पुस्तक वितरण गरेको थियो । पुस्तकको माध्यमबाट जन्मदर नियन्त्रण, गर्भपतन र समलैंगिकताका विषयमा जानकारी दिइएको छ ।
अस्ट्रेलियाका ७५ प्रतिशत नागरिकले गाडी वा यात्राका क्रममा सेक्स गरिसकेका छन् । २७ प्रतिशत महिलाले यौन जीवनमा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन अस्वीकार गरे ।
ड्युरेक्सको शोधमा नाइजेरियालाई सबैभन्दा माथि राखिएको छ। नाइजेरियाका ६७ प्रतिशत नागरिक आफ्नो यौन जीवनबाट सन्तुष्ट देखिएका छन् । नाइजेरियामा सम्भोगको औषतः समय पनि सबैभन्दा लामो २४ मिनेट रहेको छ।
जर्मन नागरिकहरु भलै संसारका सबैभन्दा खराब प्रेमी ठहरिएका छन् । तैपनि यौन सन्तुष्टिको मामिलामा निकै अगाडि छन् । जर्मनीको यौन शिक्षालाई संसारको सबैभन्दा राम्रो शिक्षा प्रणालीमा लिने गरिएको छ।
चीनलाई भलै रुढीवादी समाजका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । तर, झ्यालभित्रको दृष्य फरक छ । चिनियाँ नागरिक सेक्सका विषयमा निकै सक्रिय छन् । ७८ प्रतिशत चिनियाँ नागरिक सातामा एकपटक सेक्स गर्दछन् ।
सम्वाद र सम्मानको सम्बन्ध
आल्टरनेट र ड्युरेक्सको शोधअनुसार यदि पार्टनर एकअर्काको सम्मान गर्दछन् भने यौन जीवन पनि उत्तम हुनेछ । सर्वेमा भाग लिने ८२ प्रतिशतले यो स्वीकार गरेका थिए । एजेन्सी